Madaxweynaha Puntland oo aqbalay go’aankii Baarlamaanka uu ka qaatay kalsooni kala noqoshada Golihiisa Wasiirada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Puntland oo aqbalay go’aankii Baarlamaanka uu ka qaatay kalsooni kala noqoshada...
Madaxweynaha Puntland oo aqbalay go’aankii Baarlamaanka uu ka qaatay kalsooni kala noqoshada Golihiisa Wasiirada.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Max’ed Cali Gaas oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa aqabalay talaabadii ay mudanayaasha Baarlamaanka dowlad goboleedka Puntalnd ay kalsoonida kagala noqdeen Golihii Wasiirada.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegey in dhawaan uu soo dhisidoono Gole wasiiro oo cusub, wuxuuna intaasi ku daray in uu sameynayo wadatashiyo ku aadan dhismaha xukuumad cusub si looga jawaabo go’aanka Baarlamaanka uu qaatay.
Waxaa laga sugaya Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland in uu soo dhiso Gole Wasiiro cusub, waxaana xildhibaanada Baarlamaanku ay ku eedeeyeen xukuumadii hore waxqabad la’aan.
Kulan ay maanta kuyeesheen magaalada Garoowe xildhibaanada baarlamanka dowlad goboleedka Puntaland ayaa codkii kalsoonida u qaaday golaha wasiirada kuwaasi oo iskuraacay in xukuumadda lakaladiro.
Ilaa 47 mudane ayaa u codaysay in lakaladiro, 9 way ka aamustay halka midna uu diiday.
Hadal haynta ugu badan ayaa ah kalsooni kala noqoshada Golaha wasiirada maamulka Puntland’ goobaha lagu qaxweeyo iyo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan ee Puntland ayaa ah talaabada uu qaatay Baarlamaanka Puntland wallow dadku ay sugayaan qaab dhismeedka xukuumadda cusub.
Previous articleBarlamanka Puntland oo codka kalsoonida kala laabtay golaha Wasiirada
Next articleWasaaradda Arrimaha Dastuurka oo kulan wadatashi ah la yeelatay Qurbajoogta dalka ku sugan